घर क्लासिक स्टार्स उनीहरुसँगको कुराकानी
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल कथालाई सब भन्दा राम्रो भनिन्छ उपनाम; 'सम्राट'। हाम्रो Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपन समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँका बारेमा धेरै साना ज्ञात तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो खेल बनाउने क्षमताहरू बारे जान्दछ तर केवल केहि प्रशंसकहरू एड्रियानो जीवनीको कथा मान्दछन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरू गर्न दिन्छ।
Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:बाल्यकाल
Adriano Leite Ribeiro मासुरारी, 17 को 1982th दिन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील Rosilda Ribeiro (आमा) र Almir Leite Ribeiro (पिता) द्वारा जन्मेको थियो।
एड्रेनोले आफ्नो बचपनको जीवन ब्राजीलियन सडकको बच्चाको रूपमा धेरै खराब परिवारको रूपमा जीवन बिताउँथे। तिनका किशोरौं दिन उहाँ फुटबलमा चासो राख्नुहुन्थ्यो र आफ्ना साथीहरूसित न्यानो मैदान खेल्न प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। सधैँ नंगे मुटु, यो को गंदगी शिविरमा थियो "OrdemeProgresso" - सामुदायिक टोली, जहाँ उनले फुटबलमा सुरू गरे।
तिनको बचपनको समयमा, बलमा खेल्ने मात्र एक मात्र स्नेह थियो "पपकर्न केटा" एक उपनाम हो कि एड्रियान आफ्नो सहयोगिहरु ले जीता को लागि उनको दादी (हमेशा म्याच को समयमा) पपकर्न को पैन भर को मैदान को किनारे मा भनिन्छ।
फुटबल एक बच्चाको रूपमा मात्र एक मात्र प्रतिभा थियो। उनको बचपन सपना धनी हुन र ठूलो कार आफ्नै मालिक थियो। यो सपनाले फुटबललाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिन खोजेको थियो। तिनको परिवारले उनलाई सहयोग गरे। अडि्रियानो घरमा सबैको सहयोग थियो जसले आफैं बलिदान गरे ताकि उनी एक दिन फुटबल खेलाडी हुन सक्थे।
Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:क्यारियर सुरु
Adriano 1999 मा फ्लेमिन्गोको युवा टोलीमा आफ्नो क्यारियर सुरू गर्यो।
उनको भौतिक आकार (ठूलो र बलियो) को कारण, उनले अगाडी, आफ्नो साँचो स्थिति बदल्न पहिले बायाँ पक्षीय डिफेंडरको रूपमा खेल गर्न थाले। एड्रिियानले एक वर्षपछि वरिष्ठ टोलीलाई पदोन्नति कमाएको थियो उनीहरूको बल र बायाँ खुट्टामा गोली हानेको।
अझ धेरै, उनले आफ्नो उचाई र बल पछि दौडने स्वाद द्वारा अन्य खेलाडी र प्रतिद्वंद्वीबाट उभिएका थिए।
जून 2000 मा फ्लेमिन्गोको साथ दुई-वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे तापनि उनले 2001-02 सिजनको लागि अन्तर मिलानको लागि एक कदम सुरक्षित पारे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ।
अझै धेरै जवान, अनुभवहीन र बानीहरू जान्थे र इटालियनहरूको भाषा समेत बिना, एड्रियानो उनको आगमनमा कुनै पनि अन्यको द्वारा समर्थित थियो। रोनाल्डो डे लिमा, "घटना"। तिनको मद्दत युरोपको एड्रियानोको अनुकूलनमा साधन थियो।
Adriano को अनुसार, "रोनाल्डो डे लिमा मलाई भीड जित्न पिचलाई कसरी व्यवहार गर्ने बारे संकेतहरू दिनुभयो। मलाई घरमा महसुस गराउने उनको अचम्मको आत्मा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। उहाँले मलाई इटाली होटल्समा महिलाहरु संग रात बिताउने खर्च रोक्न बनाउनुभयो। "
Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:प्रसिद्धिको कारण
अन्तर शर्ट संग उनको पहिलो उपस्थिति मा ब्राजिलियन बनाइएको चमत्कार। त्यसपछि, उसको संख्यामा 14 थियो पछाडि। उनको प्रसिद्धि आयो जब उनले एक शट यात्रा गरे 200 किमी / घण्टा। त्यस पलबाट, फ्यानहरूले एक पौराणिक दृश्य देखे रोनाल्डो। ती चाँडै उसलाई नयाँ घटनाको रूपमा लेबल गरियो। तिनीहरूले कसैलाई देखेका थिए जसले जस्तै यस्तै विशेषताहरू छन् रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लिमा। त्यस दिन आद्रियानोले उनको प्रदर्शन जारी राख्यो वर्ग, गति, शारीरिक शक्ति, डर्बबलिङ, र बेशक, शक्तिलाई गोली मारियो।
बचपनको "पपकर्न" को रूप मा राम्रो तरिकाले जानिन्छ 'tank' र 'सम्राट'। उनले आफ्नो इटालियनको खेल खेल्ने र गोली हतियार रकेट लक्ष्यका साथ सबै इटालीलाई जिते।
उनको प्रसिद्धि उनको पतनको उदयमा समाप्त भयो जुन यस लामो टुक्रामा समाहित हुन्छ।
Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:पारिवारिक जीवन
एड्रियानो केहि स्रोतहरु संग विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमि देखि आयो। तिनका पिता एल्मिरले अफिस मेसेन्जर र टेक्नीशियनको रूपमा सुरू गरे। उहाँ सधैं एड्रियानको इच्छाहरूको लागि आभारी हुनुहुन्थ्यो। उनी सबैजना थिए जो सबै दिन दुःखी हुनेछन् किनकि उनीसँग उनको पुत्र यति धेरै मनपर्ने कपडा किनेको पैसा थिएन।
Adriano's father- Almir
एड्रियानोले आफ्नो बुबालाई सम्झाउँदा एकपटक तिनलाई "छोरा, मैले तिमीलाई महंगी उपहार दिन सक्दिनँ, तर म तपाईंलाई फुटबल टोली दिनेछु।" सबैको आश्चर्यको लागी, उनको पिताले आफ्नो सबै जीवन बचत बचत गर्नुभयो, आफ्नो छोराको क्यारियर हेर्न को लागी भोटे हड़तालमा गए।
"म भन्न सक्दिन कि त्यहाँ त्यहाँ थियो कि मैले फुटबल खेलाडी सुरु गरें," एड्रेसियानो, जो सामुदायिक च्याम्पियनशिपमा ह्याङ्ग शीर्षकहरूको लागि जिम्मेवार छ, सम्झाउँछ।
एल्मिर लाइट रिबेरोले उनको छोराले 2004 मा कोपा अमेरीका जितेपछि केही दिन बिते। तिनी बिर्रामा आफ्नो घरमै मृत फेला परेका थिए, रियोको पश्चिमी लिभर विफलताको परिणामस्वरूप।
मातृभाषा: Rosilda रिबेरोले उनको छोरालाई आफ्नो क्यारियरमा एक सफल सुरुवात देख्न आमाबाबुको प्रयास गरे। उनले कपडा कारखानाको कामदार र घर क्लीनरको रूपमा सुरू गरे। तलको फोटोले एड्रानोलाई आफ्नो आमा र मातृभाषाको साथ देखाउँछ, मातृभाषाहरू दुवै शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन्।
एड्रानो आमा (रोजिल्डा रिबेरो) र दादी (वान्डा)
मातृ दादी: Adriano को मातृ दादी, माथि देखि चित्रित Vanda मा सडक मा कैंडी, पपकर्न र बारबेक्यू को बिक्री गरेर मदद। उनले एड्रियानको क्यारियरलाई सहयोग पुर्याउनका लागि उनको पपकर्न बिक्री मोनीलाई योगदान दिए।
भाइ: Thiago Ribeiro Almir Leite Ribeiro Adriano को सानो र एकमात्र भाइ हो।
दुवै जोडीले सँगसँगै धेरै समय बिताएको छ। तिनीहरूले धेरै राम्रो तरिकाले बांडको रूपमा तल चित्रमा देखेका छन्।
Adriano र Thiago सम्बन्ध
गरीब थिआगो रिबेरो बस एक5वर्ष पुरानो थियो जब उनको पिता मरे। सम्राट हदीनियनको भाइले आफ्नै बाटो खानुपर्छ। "यो राम्रो छ किनकि यो मेरो भाइ जीता नाम थियो, तर मलाई त्यो नाम प्राप्त गर्न धेरै लडाइँ छ। मलाई लाग्थ्यो कि म धेरै युवा अझैसम्म बुलाएको छु, "न्यू जर्सी, सिडर स्टार अकादमी एकेडेमी, जहाँ उनले अध्ययन गरे, उनको यू-एक्सएनक्सक्स डलास कप मा उनको पहिलो शीर्षक जितेको छ।
एड्रियानो, निस्सन्देह, फुटबलमा राम्रो गर्दै गरिरहेको सानो हातमा गर्व हुन्छ।
थियगो- अपग्रेड गरिएको एड्रियानो आउन
Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सम्बन्ध जीवन
जोआना मचौडालाई 2008 मा मीडिया ध्यानमा ल्याइएको थियो एड्रियानोसँग उनको ओन-अफ-अफ चायर, जो घोटाला र आपसी आक्रामकताले चिन्ह लगाएको थियो।
त्यो एक ब्राजील फोटोग्राफिक मोडेल र वास्तविकता टेलिभिजन व्यक्तित्व हो, सबैभन्दा राम्रो यस खेतको ब्राजीली संस्करणको चौथो सिजनको विजेता हो। दुवै विवाहित भए र अत्यधिक वैवाहिक समस्याको कारण अलग भयो।
Adriano पूर्व गर्लफ्रेंड र पूर्व पार्टनर
एड्रियानो लारा राइबेरो, एड्रियानो रिबेरो जुनेयर र सोफिया रिबेरो नामक तीन जना बच्चाहरुका पिता हो।
तथ्यहरू प्रमाणित गर्दछ कि एड्रियानो एक राम्रो बुबा हो
Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:उनको अस्वीकार (अवसाद)
आफ्नो पिताको मृत्यु पछि, एक दुखद र लामो अवसाद आदिरियानको मृत्यु मृत्यु अनुभवको लागी र अवसाद र गिरावट सुरु भयो।
Adriano Depression Story- सम्राटको पतन
उनको पिता 3rd अगस्ट, 2004 मरेको थियो। Adriano उपलब्धिहरु 2006 अस्वीकार गर्न को लागी शुरू गर्यो किनकी उनि अझै निराश भए।
As जाजर जर्नी एक पल्ट एक साक्षात्कार मा व्याख्या:"जिते पछि इन्टर आइपुग्यो, उनले एक अनुकूल ढंगमा गोल गरे र रियल म्याड्रिडले प्रभावशाली शक्तिको लक्ष्य बनाए। भित्र भित्र मैले भने, यो नयाँ हो रोनाल्डो, उहाँसँग सबै कुरा छ। शारीरिक, प्रतिभा, गति। तर अड्रीले फुलासबाट आए र मलाई डरलाग्दो थियो। मैले कसैलाई कहिल्यै बनाएको सम्पत्तिको खतरा देखेको छु। प्रशिक्षणको अन्त्यमा लगभग हरेक दिन मैले सोधें, "आज आज के गर्दैछौ? तिमि कहाँ जादै छौ?"। मलाई डरलाग्दो थियो कि केहि समस्यामा चोट लागेको थियो। एड्रियानोले एक जना बुबा थिए जसले उहाँलाई धेरै सुरक्षित गरे र उनीहरूलाई कसरी राख्थे। तर एक सिजनको सुरुवात अघि अविश्वसनीय भयो। उनीहरूले ब्राजीलबाट बोलाए र समाचारलाई सुनेका छन् जसले दिमागको अवस्था परिवर्तन गर्यो: जब मैले सुने, "एड्रियानो, ड्याडी मरेको छ।" मैले तिनलाई चिसो देखे, फोन तल छोडेर र चिच्याउन सक्दिन। "
यसबाहेक उनको बुबाको मृत्युपछि आद्रियानोले आफ्नो बुबालाई लक्ष्य चिन्ह लगाउँदै र समर्पण गरिरहनुभयो। उहाँले आफ्नो आँखा बढाएर स्वर्गमा प्रार्थना गर्न आफ्नो हात औंल्याउँदै हुनुहुन्छ।
तथापि, त्यो फोन कलले आफ्नो जीवन बनायो धेरै नै Adriano अझै असफल भयो, उहाँले कहिल्यै अवसाद देखि छुटकारा पाउनुभयो। उहाँ एक हुनुभयो कमजोर प्रतिभासँग सम्राट।
यो प्रतिभाशाली स्टार को ताबूत मा मुख्य नाखून थियो जो एक पल्ट उनको खुट्टा मा दुनिया थियो।
Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सम्राटको पतन
अचानक, त्यसपछि उसको जन्मदिन पछि जेएनएमएक्सएक्स परिवारको प्रमुख भए। उहाँ तिनका प्रियजनहरू उहाँसित निर्भर रहनुभयो। यो त्यस्तो स्थिति थियो जुन उनी आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन दुवैमा अनुकूलन गर्न स्पष्ट रूपमा संघर्ष गरियो
अवसादबाट बच्नको लागि उहाँले अल्कोहल पिउन दिनुभयो। ब्राजिललाई छोड्न अनुमति दिएर Adriano समस्या समाधान गर्न कोसिस गर्नुहोस्।
एड्रियान डिप्रेशन स्टोरी- सम्राटको पतन
उहाँ जानुभएको बेला पनि उनीहरूले दबाबलाई सम्हाल्न सकेन र दु: खीको कुरा, उनी पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सकेनन्। सबै कुरा उनको लागि अलग थियो।
उनको आगमन फिर्ता यूरोपमा 2010 / 2011 सिजनमा रोमा पुग्यो। रक्सीलाई पराजित गर्न असक्षम हुनुको कारण, रोमले इटालीको राजधानीमा7महिना पछि मार्च 8, 2011 मा सम्झौता रद्द गर्यो।
Adriano क्यारियर स्टोरी
कोरिन्थीहरूमाथि बस्न समेत, एड्रियानो अझै पनि समस्या थियो। पहिलो, उनले आफ्नो Achilles प्रहार गरे अप्रिल 19 मा, जबकि उनले प्रशिक्षण गरिरहेको थियो। शल्यक्रिया पछि, तिनले छ महिनाको म्याद सकियो।
पुन: प्राप्त गरेपछि, उनले अक्टोबर 9, 2011 मा कोरिन्थीहरूको लागि पहिलो खेल खेले। 12 मार्च 2012 मा, एरिआरियान कोरिन्थियन्स द्वारा रिलीज भएको थियो, उनको अनियमित उपस्थिति पछि, धेरै अनुशासन भेद, हरेक समय पनि पीता भयो र फुटबल मा रुचि को कुल कमी।
Adriano Downfall- सम्राटको पतन
यो समय, उहाँले अवसाद र शराबताको भयानक स्थितिमा उभिनुभयो।
Adriano लाई के भयो? धूम्रपान, पेय र रक्सी स्टोरी
यो Adriano को अन्त थियो। एटलेटिको परेनासेन्स र मियामी युनाइटेडमा उनको चाल कुनै सफलता हासिल गर्न सक्दैन।
Adriano बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:रोनाल्डो डी लिमा र इब्राहिभोभिक बदल्न असफल
Adriano को लागि प्रतिस्थापन गर्न पेश गरेको थियो रोनाल्डो ब्राजिल राष्ट्रिय टोलीमा। तर डुङ्गा, ब्राजील कोच, एड्रियान मन परेन, र प्रायः आलोचकहरु।
उहाँ बीचको मिश्रण पनि थियो रोनाल्डो र Ibrahimovic। उनीहरु सबै केहि थिए, ती भन्दा राम्रो हुन सक्ने क्षमता पनि।
एड्रियानो यी मानिसहरू अनुकरण गर्न असफल भयो
एकचो राम्रो, बहुमुखी, र आधुनिक स्ट्राइकर, जो उत्कृष्ट प्राविधिक क्षमता संग संयुक्त शक्तिहरु लाई उनको प्रशंसकहरु र फुटबल प्रेमियों मा विफल भयो।
एड्रियानो अझै पनि एक भ्रम र एक बलिदान सदस्य को त्याग्छ CLASSIC फुटबल स्टार
फेलिप एन्डरसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
मार्सेलको बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य